SOMALITALK - QANDALA
Xasuuqa Masaajidka Al Hidaaya: Astaanta Macatab ku dirirnimada Xabashida
Waxa 20/4/08 ciidamada cadawga Itoobiya ku gawraceen Masaajidka Al Hidaaya rax
an wadaado ah, oo uu ku jiro imaamkii masaajidku, Sheekh Siciid Yaxye iyo dadkii kale ee masaajidkaas ku cibaadaysanayay.Ma garanayo ereyo laga bogan karo, muujinta dhiilada iyo murugada meeshaas ka dhacaday.Kali ah,waxaan ilaahay uga baryayaa samir iyi iimaan ugu deeqo eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen.
Waxa kale oo isla todobaadkan taliska cadawga ah ee Ethiopia, xiriirka dibloomasiyeed u jaray dalka Gadar( Qatar) .Ka dib markii uu ku eedeeyay in talefishanka dalkaas laga leeyahay ee Aljazeera,xasilooni daro ka wado geeska afrika.Al Jazeera oo daaha ka rogtay xasuuqa,gumaadka iyo macaluulinta taliskaasi ku hayo dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degaanka Ogaadeniya(Soomali Galbeed) intooda diidan guumaysiga Tikreega!
Miyaa garanaysaan cid aan Itoobiya ahayn, oo xasilooni daro iyo xasuuqa ka wada Geeska Afrika?
Taliska Melez,waxa uu waliba doonayaa inuu Soomaali meel madaw ku wada gawraco,lagana waramin dabar-goynta ciidankiisu ku hayo dadkeena!
Hadaba waxay ila noqotay inaan ka gaabsado,ku talax taga wax ka sheega muuqaalka tooska ee xasuuqa Al Hidaaya,kana abaaro gorfaynta dhacdadan, wajiga kale ee dahsoon iyo xididada dhacdadani salka ku hayso.
Arintaas oo wax badan ka iftiimin karta, gun-raaca, sooyaalka taariikeed iyo waayeed ee arintani ka shidaal qaadato.
Xaajadani ma ugubaa mise waa curad?
Masaajidka Al Hidaaya maaha kii ugu horeeyay ama ugu danbeeyay ee ciidanka macatab ku dirika ahi, maato ku gawraco ama dumiyo. Waxa uu xidhiidh toos ah la leeyahay colaad gaamurtay iyo asal nacayb diineed oo 700 sano jirta!
Laga soo bilaabo qarnigii 13aad iyo ilaa maantadan qoyan,dhul-balaadhsiga ,dilka.dhaca iyo hanti maroorsigu, wuxuu ahaa siyaasad joogta ah, oo talis kasta oo dalka Ethiopia ka hanaqaadaa,kula dhaqmo dadyowga Muslinka ah ee Geeska Afrika.
Qarniyadii dhexe waxa dhici jirtey,in Xabashida duulaan ku ekeeyaan dadyawga Muslinka,dumiyaan talisyadooda,goobahah cibaadada ,jidgooyaan wadooyinka ganacsiga,gaar ahaan Harar,Saylac iyo Imaaradii Islaamka ahaa ee degaamadaas wixii ka soo rogan buuraleyada Amhara iyo Gobolka Tigray.
Dhibaatada ay dadka Muslinka ah,ku hayeen ayaa dhalisay kacdoonkii iyo jihaadkii Axmed Guray,horaantii qarnigii 16aad.
Halgankaas oo ahaa iska caabin sharci ah,oo layskaga waabinayay weerarada Xabashida.
Axmed Gurey wuxuu ku daah-furay guulihiisa taarikhda galay, dagaalkii caanka ahaa ee la baxay Shimbro Kore ee dhacay bishii Marso 1526.Dagaalkaas ciidanka xabashidu waxa uu ka koobnaa 10,000 fardooley gaashaaman ah iyo 200,000 ciidamada lugta ah.
Dhanka kale ciidanka Axmed Gurey,waxa uu ka koobnaa 500 fardooley ah iyo 12000 ciidamada lugta ah.
Dagaalkaas oo Muslimiinta libintu ku raacday ,waxa uu daahfur u ahaa iska caabinta tayaysan ee Muslimiinta Geeska Afrika(Markaan Muslimiinta leeyahay,shaki galin maayo Soomaalinimada Axmed gurey iyo laf-dhabarnimada kaalinta Soomaalida ee jihaadkaas,ee waxaan muujinya inaan dagaalku mid qoomiyadeed oo kaliya ahayn,balse diini ahaa,Muslimiinta Geeska Afrikana ka wadad qayb-galeen).Waana jawaabtii gardarooyinkii Xabashida ee qarniyada jitrey.
Guulihii iyo gadoodkii Muslinka Geeska Afrika waxa ka dhashay Kiniisad dumin fal-celis u ahayd, masaajid dumintii iyo dilkii culimada, maadama astaan u ahaayeen jirida iyo faafida diinta islaamka ee Geeska Afrika.
Sida uu ku cadeeyay Carab Faqiih, oo ka qayb galay dagaaladii Axmed Gurey ,buuga uu dagaaladaas ka qorey ee la yiraa Futuux AL Xabash(furashadii Xabashida) ciidamada muslimiintu markay qabtaan maxaabiista Xabashida,markiiba waxay degdeg nafta uga jaru jireen Baadariyada diinta ee ay gacanta ku dhigaan.
Waayo? Kaalinta ay ragaasi ka ciyaari jireen,dhiiragalinta dagaalada Muslinka lagu soo qaadi jiray, oo iyagu horseed ka ahaan jireen ama abaabuli jireen (eega Fatuux Al Xabash boga151)
Waa arinta ku kaliftey ciidankii Axmed Gurey, inay gubaan kaniisado badan oo ka dhisnaa dhulkii ay ka qabsadeen ciidanka Xabshida. Taas oo hayd sidaynu xusnay jawaabtii,,dumintii iyo gubistii xad-dhaafka ahayd ee Xabashidu u gaysan jireen Masaajidada Muslimiinta. Waxa laga magacaabi karaa Kiniisadii ugu caansaanaa ee la gubay:
Kiinasadaas oo ahaa kuwo, xabashidu ku dhaarato.Arintani waxay ay cadaynaysaa,muuqaalka diimeed iyo macatab ku dirireed ee colaada Xabashidu Soomaalida iyo Muslinka Geeska Afrika u qabtey, walina kula dhaqmayso.
Dhanka kale,in falalkaas Muslimiintu isdifaac iyo naf-lacaari,ahaa waxa inoo cadaynaya hadalkan hoos ku qoran,ee ka midka ah warqad boqorkii Xabashidu Lebna Dengel 1508-1540, u soo qorey Axmed Gurey (boqorkani waxa uu dhintay, isagoo Axmed Gurey baacsanayo,wiilkiisii oo dhexlayna waxaa dilay Garaad Nuur,oo Axmed Gurey ka dib xilka jihaadka qabtay)
�Muslimiinta hadaad tihiin ,waxaan ku soo duuli jirnay dhulkiina,dhici jirnay hantidiina oo waliba dumin jirney guryhiina.Imika waa naga adkaateen oo na dulayseen.Hadaba intaasi idinku filane ku noqda dhulkiinii oo, naga joojiya weerarka�eeg Futuux al Xabash 152. 1
Dagaaladaas uu xusay waxa ka mid ahaa,weerar isla boqorkaasi magaalada Saylac ku qaadey,dhibaato baahsana u gaystay dadkii deganaa magaaladaas.
Waliba xiliga Xabashidu Saylac qabsatay ee gubtay , ciidamadii Boortaqiiskuna waxay ka duqeeyeen magaalada dhinaca bada sanadihii1517-1518(eeg Trimingaham).
Waxaana ku Shahiiday weeraradaas Amiir Maxfuud,oo ahaa Amiirkii Saylac,dhanka kalena Axmed Gurey sodog u haa( waxa uu dhalay Doonbiro,oo ahayd xaaskii Axmed Gurey).
Boortaqiisku isla wakhtiyadaas,waxay weerar iyo duqayn dhinaca bada ah ku qaadeen Muqdisho iyo Berbera.Bal is-barbardhig waxa maanta Xamar ka taagan iyo waliba duqaynta ciidamada Mareekanka!
Dagaaladaas rogaal celinta iyo iska caabinta ahaa,Axmed Gurey waxa uu ku qabsaday 90%degaamanada xabashida.Isagoo sii wada halgankaasii ayuu, Shahiiday Feb 22/1543,ka dib markii ay dhacday oo xabad uu ku dhuftay, askari Booratqiis ah Lishpona(caasimada dalka Portugal) laga soo amray,Kiniisada Roomana ee Fatikaanka looga soo siiyay furihii janada!!
Ka dib dhimashadii Axmed Gurey waxa istaagey gulihii Muslimiinta.laakiiin Xabashida lafteeda,dagaaladaasi waxay wiiqeen awoodoodii ciidan.Dhirbaaxadii iyo casharkii Axmed Gurey u dhigay,oo dhegahooda ka qiiqayay awgeed,waxa laga nastey dhibkoodii mudo sadex qarni ah 300 sanadood.
Ilaa laga soo gaaro dabayaaqadii qarnigii 19aad iyo imaanshii guumaysiga reer Yurub(1884 shirkii Barlin ka dib)oo mar kale soo nooleeyay,gardardii iyo dhibtii u gaysan jireen Muslinka Geeska Afrika.
Halkaas oo Milinlik mar kale, ambaqaaday dhulbalaadhsigii caanka ahaa ee uu ku boobay dadka Muslinka ah .Dhulalka uu duulaankiis ku qabsaday,wax ka mid ah Addis Ababada (1886) maanta caasimada u ah Ethiopia!
Isla sanadkii ku xigayna waxa uu qabsaday,magaalada Harar sanadkii1887.Hubka iyo qorshaha uu dhulalkaas ku qabsaday,waxa u fidiyay guumaystaayaashii reer Yurub!
Harar oo ahayd caasimadii Axmed Gurey iyo astaanta gaashaandhiga Muslimiinta Geeska Afrika. Talaabadii ugu horeysay ee uu qaaday Minlik markuu Harar qabsaday , waxay ahayd,duminta Masaajidkii magaalada ugu waynaa,waxaanu ka dhisay,bartii uu ka yaalay Kiniisad ilaa maanta taagan!!
Waraaqdii caanka ahayd ee uu u diray dalalka reer yurub,waxa uu ku cadeeyay inay Ethiopia tahay Jasiirad Kiristaan ah ,oo ku dhex- taala badwayn Muslimiin ah,waxa kale oo tilmaamay Amiir C/laahigii Harar,ee uu magaalada ka qabsaday, Axmed Gurey kale oo la jabiyay!!
Bal u fiirso qoto-dheerida iyo xiriirsanaanta colaada ninkaas ku jirtay,waliba ogow isaga iyo Axmed Gurey waxa u dhexeeyay 300 sano!!
Mar kale waxa damacii dhul-balaadhsiga iyo macatab ku dirirnimada Xabashida,waxa hakiyay dhalashii Jamhuuriyada Soomaaliya,waana la wada xasuustaa dagaaladii 1964 iyo 1977(Xasuuso Axmed Gurey waxa jabiyay Bortaqiis,Ciidankii Soomaalidana waxa jabiyay 1977 Ruush!!).
Balse markii Soomaalidu is cuntay, ayay seetada goosatey cadaawadii guunka ahayd ee Xabashidu u haysay Soomaalida iyo dadyawga Muslinka ee Geeska Afrika.
Xasuuqa Masaajidka Al Hidaaya iyo maatada laga duqaynayo wasaaradii gaahaandhiga qaranka ee laga hogaaminayay dagaalkii 1977 , waa midhaha ka dhashay maan-gaabnimada Soomaalida iyo cawaanimada dagaalada sokeeyay ee lagu wada gubtey.
Markii ay is wada dooxataa daad u soo galay .
Hadaba qofkii doonya inuu fahmo waxa ka dhacay maanta Masaajidka Al-Hidaaya,waa
inuu marka hore ka dheragsanaada,taxanaha iyo qotodheerida colaada diinta ku salaysan iyo inay jireen,boqolaal dhacdo, oo Al-Hidaaya oo kale ahaa, oo hore Xabashidu inoo gaysatay.
Sidaa awgeed odhaahda caanka ee tiraahda�Taariikhdu way soo noq-noqotaa� run badan ayaa ku jirta.
Soomaalidu,oo ah cududa Islaamka ee Geeska Afrika.Hadii aanay sidan isu dhaamin,oo aanay ka waantoobin xinka qabyaalada iyo tolaayda ninka danta leh.
Waxa hubaal ah,in maalinba koox ,Xabashidu xasuuqi(waa sida maaantaba taagane)iyadoo Soomaalida kale daawaynayaan, ama ku faraxsanyiinba!
Ugu danbayn, waxaan leeyahay �Soomaalida maanta indhaha ka qarsanaya ama ka qayb-qaadanaya,gumaadka Xabashidu kula kacayso walaalahooda Soomaaliyeed,ha ogaadaan in kawaanka Ethiopia la wada saaranyahay,balse la kala horeeyo oo kali!�
Trimingham:Islam in Ethiopia(Oxford 1952)